December 2, 2021 - Celegroup
December 2, 2021 Celegroup1975 0
မောင်နှမတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးကို အလေးပေးသင့်တဲ့ အချက် (၈) ချက်
သားဦးသမီးဦးတွေဟာ မိဘတွေရဲ့ ဘဝကို စတင်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ရတနာလေးတွေပါပဲ။ သူတို့တွေဟာ အရမ်းကို သည်းသည်းလှုပ် အချစ်ခံရပြီးတော့ မိဘတိုင်းကလည်း အားကိုးကြပါတယ်။ Adler ရဲ့သီအိုရီအရ အကြီးဆုံးကလေးတွေဟာ များသောအားဖြင့် တာဝန်အသိတတ်ဆုံးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးဖြစ်ပြီး မိဘတိုင်းကိုလည်း အားရှိစေတဲ့ အရာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အငယ်တွေ တိုးလာတဲ့အခါ အကြီးဆုံးကလေးတွေက အနစ်နာခံရသလို မိဘတွေကလည်း အငယ်တွေကိုပဲ ဦးစားပေးမိသလို ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အကြီးဆုံး ကလေးတွေကို ဘာလို့ အလေးပေးသင့်သလဲ ဆိုတာ […]
လာမယ့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးဆုံးမိုးလေဝသသတင်းကြီးကြေညာလိုက်ပြီ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်… လာမယ့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးဆုံးမိုးလေဝသသတင်းကြီးကြေညာလိုက်ပြီ လာမယ့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးဆုံးမိုးလေဝသသတင်းကြီးကြေညာလိုက်ပြီ လာမယ့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးဆုံးမိုးလေဝသသတင်းကြီးကြေညာလိုက်ပြီ လာမယ့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးဆုံးမိုးလေဝသသတင်းကြီးကြေညာလိုက်ပြီ လာမယ့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးဆုံးမိုးလေဝသသတင်းကြီးကြေညာလိုက်ပြီ ရုပ်သံဖိုင် ကြည့်ရန် zawgyi လာမယ့္ႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးမိုးေလဝသသတင္းႀကီးေၾကညာလိုက္ၿပီ ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္… လာမယ့္ႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးမိုးေလဝသသတင္းႀကီးေၾကညာလိုက္ၿပီ လာမယ့္ႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးမိုးေလဝသသတင္းႀကီးေၾကညာလိုက္ၿပီ လာမယ့္ႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးမိုးေလဝသသတင္းႀကီးေၾကညာလိုက္ၿပီ လာမယ့္ႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးမိုးေလဝသသတင္းႀကီးေၾကညာလိုက္ၿပီ လာမယ့္ႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးမိုးေလဝသသတင္းႀကီးေၾကညာလိုက္ၿပီ
ရထားစီးလာတဲ့ ၂၅ နှစ် အရွယ် ရှိတဲ့ ကောင်လေးက ရထားပြတင်းပေါက် အပြင်ဘက်ကို ကြည့်ပြီး သူ့အဖေကို အော်ပြောလိုက်တယ်။ ” အဖေရယ် ကြည့်ပါအုံး ၊ သစ်ပင်တွေက သားတို့ရဲ့ အနောက်ဘက်ကို ရွေ့နေတယ် ” အဖေဖြစ်သူ ကတော့ ပြုံးပြလိုက်တယ်။ ဘေးမှာရှိတဲ့ စုံတွဲဇနီးမောင်နှံ ကတော့ သနားတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကောင်လေးကို ကြည့်နေကြချိန် မှာဘဲ ကောင်လေးက ပြောပြန်တယ်။ ” အဖေရယ် […]
မြန် မာ နိုင် ငံ အ အေး လှိုင်း ဖြတ် မည့် အ ချိန် ကြေ ညာ ပြီ ကြို တင်ပြင် ဆင် ထား ကြ ပါ 2022 ဇန် န ဝါ ရီ လ တ တိ ယ အ ပတ်မှာ တော့ မြန် မာ အ […]
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သူဌေးကြီးတယောက် ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ့သူဌေးကြီးမှာ ရင်သွေးဆိုလို့ အမြဲပျင်းရိနေတဲ့ သားတယောက်ပဲ ရှိသတဲ့။ အဖေ့ပိုက်ဆံ ထိုင်ဖြုန်းဖို့က လွဲရင် ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး။ ပညာကိုလည်း ကောင်းကောင်း မသင်ဘူးတဲ့။ သူဌေးကြီးက သူသေသွားရင် သားလုပ်သူက ရှိသမျှ အကုန် ရောင်းစားပြီး ဆင်းရဲသား ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်တာပေါ့။ သူ့သားကို ကြိုးစားပြီး ပြုပြင်ပေမယ့်လည်း မရဘူးတဲ့ကွယ်။ သားတယောက်ပဲ ရှိတာမို့ စိတ်ပူနေတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ သူ အကြံရသွားတယ်။ […]
သမီးလေးကိုချစ်ရင်(သို့)သက်ငယ်မုဒိန်း.. လင်မယား၂ယောက်ချစ်ကြတယ် ယောကျာ်းကလဲ လူချစ်လူခင်တော်တော်များတယ်…သမီးလေးမွေးထားတယ်အခုဆို ၁နှစ်၃လ. ဖေဖေမေမေ မပီကလာပီကလာလေး ခေါ် တတ်ပြောတတ်နဲ့မိဘတွေအချစ်ပိုကြတာပေါ့ တနေ့ အဖေလုပ်သူက အလုပ် ညစာစားပွဲလေး လုပ်မှာမို့ မိန်းမ ရေ သမီး လေးကို တို့တွေ အပေါင်းအသင်းတွေကိုပြကြကြွားကြမယ်ပေါ့ မိဘတို့သဘာဝပါသားသမီးလေးပွဲထုပ်ကြတာက… ဆက်ပြောမယ်နော်….မိသားစုလိုက်ညစာစားပွဲကားမောင်းပြီးသွားကြလေရဲ့ သမီးငယ်လေးလဲ ဝူးဝူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ရီမောပြီး မိသာစုလေးပျော်ရွှင်နေကြတာ…. ဟိုရောက်တော့ အားလုံးစုကြဆုံကြလေ ရဲ့ လူ၁၅ယောက်လောက်ရှိတယ်….ပွဲပြီးသွားတယ်…ပြန်သူတွေပြန်ကုန်ကြတယ်…ခလေးလေးကတော့ အိပ်နေတယ်….. အဖေလုပ်သူက သူ့သူငယ်ချင်း၂ယောက်နဲ့စကားကောင်းတုန်း…..ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကြ ပြန်ကြတယ် သူငယ်ချင်း ၂ယောက်က. […]
အမျိုးသမီးများ အတွက် အသံတိတ် လူသတ်သမား…
မ, မျိုးဥအိမ် ကင်ဆာရောဂါ ဟာ ရောဂါအစ ပျိုးနေစဉ်မှာ သော်လည်းကောင်း ၊ ရောဂါ အခြေ အနေပြင်းထန် နေစဉ်မှာ သော်လည်းကောင်း ထင်သာ မြင်သာ လက္ခဏာတွေ စိုးစဉ်းမျှ မပြတဲ့ အတွက် ၎င်းရောဂါကို “ အမျိုးသမီးများ အတွက် အသံတိတ် လူသတ်သမား ” လို့ ဆေးပညာရှင် များက ဆိုပါတယ် ။ ရောဂါ ဝေဒနာရှင်များ အနက် အလွန်တရာ […]
တခါတုန်းက ရွာတရွာမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ သခ်ျာပညာရှင်ကြီး တယောက်ရှိတယ်။ သူဟာ သခ်ျာပညာမှာ တော်လွန်းလို့ ဘုရင်ကတောင် သင်္ချာပညာရပ်တွေ အတွက် သူ့ကို ခေါ်ပြီး တိုင်ပင်ရတယ်။ တရက်မှာ ရွာသူကြီးက သူ့အိမ်ကို လာလည်ရင်း ခုလိုပြောတယ်။ ” ခင်ဗျားကသာ ဘုရင်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံလို ဖြစ်နေတာ ခင်ဗျားရဲ့ သားကတော့ ရွှေနဲ့ငွေမှာဘယ်ဟာက ပို အဖိုးတန်မှန်းတောင် မသိဘူး။ ထူလိုက် အ လိုက်တာ လွန်ရောဗျာ ” […]